के स्वास्थ्य समस्या आतिशबाजी हुन सक्छ?
तपाईं एक कुकुर छ भने, त्यसपछि तपाईं शायद बस यो अवस्था हेर्दै छैन। तपाईं अर्को अचानक विस्फोट आतिशबाजी, तिमी कसैलाई प्रतिस्थापित रूपमा आफ्नो कुकुर भनेर हेर्न भने: यो डर थाल्छ, जहाँसम्म सबैलाई टाढा लुकाउन, फलस्वरूप tends - तपाईं सम्पूर्ण साँझ उनको सान्त्वना प्रयास छ। खैर, केही विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो बाहिर जान्छ, त्यसैले आफ्नो व्यवहार तपाईंको कुकुर तपाईं केही भन्न खोज्नुभएको छ।
किन आतिशबाजी धेरै पक्षहरूमा मा हानिकारक छन्?
संसारमा र धेरै शताब्दीयौंदेखि चर्को, चम्किलो, रंगीन, आनन्दित आतिशबाजी फेंकना कि विस्फोट सार्वजनिक जमघट सबै प्रकार को एक मनपर्ने भाग थिए।
चिनियाँ 2,000 वर्ष पहिले तिनीहरूलाई आविष्कार, तर ती दिनमा तिनीहरूले यस्तो भूत र nomads डरा बढी utilitarian उद्देश्य तिनीहरूलाई प्रयोग।
त्यसैले, केही आश्चर्य हुन सक्छ तिनीहरूले हावा गुणस्तर, साथै धेरै स्वास्थ्य पेशेवरों अध्ययन गर्ने विशेषज्ञहरूले सुनिश्चित गर्न गरिबी हो कि सिक्न गर्दा विभिन्न उत्सव घटनाहरू लागि आतिशबाजी को प्रयोग। आतिशबाजी, हामी पहिले नै थाह छ, हावा, को विस्फोट धेरै रिस रसायन जारी हुनुहुन्छ किनभने प्रदूषित गर्न सक्नुहुन्छ। खत्तम, वायु प्रदूषण, जो आतिशबाजी को प्रयोग संग जोडिएको केही तरिका मा, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ पुरानो रोग worsen गर्न सक्नुहुन्छ। यो जो अस्थमा र हृदय समस्या ती मानिसहरूको लागि विशेष गरी साँचो हो।
Salutes र वायु गुणस्तर
वातावरण अध्ययन गर्ने धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले, हावा को गुणस्तर विश्लेषण मान्छे संसारभरि थुप्रै ठाउँमा आतिशबाजी प्रयोग गरेपछि। यी अध्ययन सबै हामी कुनै पनि सास फेर्न चाहनुहुन्छ छैन जो हावा, मा जारी प्रदूषण को सेट विस्फोट को एक परिणाम रूपमा देखाएका छन्।
एयर आतिशबाजी - एक घनी पैक ज्वलनशील रसायन, ध्यान दिएर एक प्रभावशाली ध्वनि र विस्फोट को दृश्य प्रभाव सिर्जना गर्न डिजाइन जो।
कालो पाउडर (कोइला, सल्फर र पोटासियम नाइट्रेट को मिश्रण) सामग्रीहरू त्यहाँ एउटा विस्फोट छ (फ्यूज समक्रमित मार्फत) हावा चल्न र त्यसपछि गरिन्छ, खोल तोड्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। उत्तरार्द्ध को फलस्वरूप सबै दिशामा "तारा" (सानो गोलाकार वस्तुहरु, ignited गर्दा धेरै बिस्तारै बाल्न जो) छन्। यो त हामी खुसी छन् कि उज्ज्वल झिल्काहरू उत्पादन ताराहरु।
विभिन्न रंग मा एक स्पार्क कसरी प्राप्त गर्ने?
रसायन को एक धेरै आतिशबाजी विस्फोट हुँदा हामी देख्नुहुनेछ सबै रंग सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, सोडियम यौगिकों उत्पादन पहेंलो झिल्काहरू बारियम मिश्रित - हरियो, तामा यौगिकों - खैरो, स्ट्रोनटियम र लिथियम - रातो रंग। यस्तो नेतृत्व, आर्सेनिक, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, मध्यम र फलाम जस्तै अन्य रसायन, पनि फरक प्रभाव सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
हावा कणहरु मा अस्थायी सक्षम छन् कि?
हाइड्रोकार्बन जल देखि परिणाम जो महामण्डल उत्सर्जन को मानक प्रकार देखि अलग (जस्तै, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र कार्बन), विस्फोट गर्न वातावरणमा अन्य पदार्थ को अधिकता प्रवेश देखि नेतृत्व। तिनीहरूलाई धेरै धेरै सानो आकार छ कि हावा मा कणहरु को रूप मा पाइन्छन्। यहाँ सजिलै हामीले सास फेर्ने बेला हाम्रो फोक्सोमा मा गहिरो भित्र पस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। कि विस्फोट पछि हावा मा हो अदृश्य कण, अक्सर रसायन को एक किसिम, समावेश धातु।
को विस्फोट आतिशबाजी अध्ययन नजिकै क्षेत्रमा धेरै हावा गुणस्तर को परिणाम तुरुन्तै उच्च वेग कणहरु संग आतिशबाजी पछि रसायन हावा मा भित्र पस्नु र यो धेरै किलोमिटर अर्धव्यास मा तुरुन्तै मैला पार्नु भनेर देखाएका छन्। कसरी लामो हावा क्षेत्र फिक्री छ रूपमा, फोहोर हुनेछ, यो सीधा स्थानीय स्थान वर्णन गर्न, विशेष गरी यस्तो हावा गति, चिस्यान र वर्षा रूपमा मौसम अवस्था संग सम्बन्धित छ। तैपनि, गुणस्तर कम से कम धेरै घण्टा deteriorate हुनेछ।
को विस्फोट पछि के स्वास्थ्य समस्या देख्न सकिन्छ?
यो कि हावा हो अदृश्य कण, श्वसन प्रणाली मा समस्या पैदा गर्न सक्छ राम्रो ज्ञात छ।
पुरानो फोक्सो रोग विरामी particulate कुरा को उच्च स्तर अनुभव, र यो कडा पल्मोनरी समारोह को worsening, सास को shortness को उपस्थिति संग सम्बन्धित छ। केही अवस्थामा पनि मृत्यु सम्भव छ, एक अस्पतालमा रहेको एक जोखिम छ। जबकि यो बिरामी स्वास्थ्य सीधा आतिशबाजी प्रयोग गर्न सम्बन्धित छ भन्ने 100% छैन सिद्ध भएको छ, विशेषज्ञहरु विस्फोट पछि हावा मा भित्र पस्नु कि हानिकारक पदार्थ, पाठ्यक्रम, यी नै समस्या ट्रिगर गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्छन्।
अन्य के समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ?
यो अस्थमा भएका मान्छे, प्रदूषित हावा लक्षण aggravates कि सिद्ध भएको छ। तपाईं कहाँ तिनीहरू आतिशबाजी झटका योजना ठाउँ नजिकै खडा गर्न धेरै नजिक छैन हुँदा विशेष भीषण आक्रमण पनि उत्पन्न हुन सक्छ।
यो आतिशबाजी पछि प्रदूषित हावा जो रगत कम अक्सिजन स्तर हुन सक्छ, मान्छे हृदय आक्रमण र हृदय र रक्त नली को अन्य तीव्र समस्या, तर कुनै पनि कारण बनाउँछ भन्ने सिद्ध थिएन तापनि हृदयघात एक व्यक्ति लागि खतरनाक हुन सक्छ। गरिबी एनजाइना, वा हृदयघात भएकाहरूले नियन्त्रण गर्ने मान्छे, एकदमै होसियार हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य समस्या कसरी जोगिन
वास्तवमा आतिशबाजी देखि वायु प्रदूषण कारण थिए कि समस्या अन्य कुनै पनि वायु प्रदूषण को एक परिणाम रूपमा खडा कि समस्याको हदसम्म यस्तै छ।
ठूलो फरक आतिशबाजी प्रयोग आउँछ कि एक विशिष्ट प्रदूषण, एक विपरीत, अस्थायी हो, छ। र अझ राम्रो - यो निर्धारित गर्नुपर्छ। अनुसूचित घटना को अग्रिम को अस्थायी प्रकृति सामान्यतया हामीलाई सम्भव समस्या जोगिन गर्न अनुमति दिन्छ।
साधारण अर्थमा प्रयोग - मुद्दा सुल्झाउने गर्न प्रमुख छ। तपाईं अस्थमा छ भने, तपाईं scrupulously आतिशबाजी संग अन्तरक्रिया गर्नु हुँदैन। तपाईं यो कार्य को समयमा नजिकैको हुनेछ भने, तपाईंले टाढा सकेसम्म यो स्थान टाढा प्राप्त गर्न आवश्यकता हो, यसलाई हावा विरुद्ध जान उचित छ। आतिशबाजी कोठा मा विस्फोट हुनेछ भने, राम्रो-ventilated कोठा मा हुन प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं अस्थमा छ र तपाईँले राम्रो आतिशबाजी अप पारित गर्न सक्दैन भने, तपाईं रसायन देखि श्वसन पर्चा रक्षा गर्न सुरक्षा पट्टी वा पारंपरिक मास्क प्रयोग विचार गर्नुपर्छ। आफ्नो खल्ती एक उद्धार inhaler छ तपाईंलाई छ कि निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंलाई स्वास्थ्य सबै सही छन् भने, जोखिम धेरै कम देखिन्छ। तर, अर्कोतर्फ, हामी साँच्चै परिणाम पनि हुन सक्छ के थाहा छैन। त्यसैले रोग सबै किसिमका प्रकटीकरण आफ्नो संभावना कम गर्न भविष्यमा कि त, एक दूरी देखि आतिशबाजी हेर्न।
रासायनिक पदार्थ संग गम्भीर वायु प्रदूषण आतिशबाजी। तैपनि, क्षणमा, जो बाहिर गरिएका चिकित्सा समस्या, यो प्रदूषण गर्न जोखिम कारण हुन, पहिले नै स्वास्थ्य समस्या भएका मात्र ती मानिसहरूलाई खतरामा देखिन्छ। तपाईं अस्थमा वा हृदयघात छ भने, तपाईंले टाढा उज्ज्वल चमक टाढा रहन प्रयास गर्नुपर्छ, यो आतिशबाजी सडक मा विस्फोट हुँदा तुरुन्तै कोठा, मा जाने मनमोहक छ। सबै अरूलाई व्यावहारिक दूरी मा सौन्दर्य रमाइलो गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
रगत चीनी मा खानाको पछि आदर्श
मेनिनजाइटिस: नतिजा र रोग को सुविधाहरू
Gastralgia - यो के हो?
ढाँचा, प्रक्रिया र modelirrovanie: बच्चाहरु को लागि Undershirts
प्रकाश किशोरकिशोरीहरूको लागि विद्यालय बनाउन-अप। बालिका लागि कस्मेटिक्स को सेट
फाइलहरू कस्तो खुले BAK र